SomaliaReport: Urur Kenyati: Lagu Eedeeyey Tababarida Da'yarta
Ururka jamhuuriga Mombasa ee laga mamnuucay dalka Kenya (MRC) iyo urur-diimeedka mayalka adag ee al-shabaab ayaa labadaba lagu eedeeyey inay iska kaashadaan dagaal-galinta da’yarta loo dirayo dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ah.
Patrick Ogutu oo ah sarkaal sare ee ka tirsan bilayska ayaa sheegay inay hoggaanka labadan urur ay been ku lug gooyaan waalidiinta caruurtan dhalay eek u nool dhul-xeebeedka Kenya, iyaga oo u sheega inay awlaaddoodou laga soo shaqaalaysiin doono dalka Soomaaliya.
Al-shabaab iyo MRC ayaa leh xidhiidh tababarid lo sameeyo da’yarta ku nool dhul-xeebeedka Kenya, sida ay dhigayso xogta naga soo gaadha saraakiisha bilayska ee Mombasa. Ururadan ayaa u balanqaada askari walba musaar ah 1000 oo dollar. Sidana waxaa wargayska Somalia Report u sheegay Ogutu.
Da’yarta ku sugan Mombasa iyo dhulo xeebeedyadaa ayaa badidoodu aysan haysan wax shaqo ah, waxayna isticmalaan waxyaabaha maanka dooriya, sidaa darteed ayey wada aaminsan yihiin in rajada kaliya ee ay ku saacidi karaan qoysaskooda ay tahay inay ka soo dagaalamaan Soomaaliya. Ogutu ayaa intaa sii raaciyey.
Ogutu ayaa tibaaxay inay ciidamada dabagalka iyo ka hortagga argagixisada ee Kenya ay hawlgallo ku soo qabqabteen xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa xaafadda Eastleigh oo ah meesha ay ku nool yihiin Soomaalidu isla markaana ah rugta ganacsiga ee jaaliyadda Soomaaliyeed.
Kuma koobna oo kaliya dhul xeebeedka oo kaliya ee waxay kale oo ay ku sugan yihiin xaafadda Eastleigh iyo gobolka waqoyiga bari halkaas oo la rumaysan yahay inay ka jirto shabakad taageerta al-shabaab ayuu ku daray hadalkiisii.
Wuxuu ugu baaqay dawladda Kenya inay dawladda Soomaaliya ee tabarta daran ka caawiso xoogagga al-shabaab si waddankan baaba’ay dib logu soo dabaalo nabad iyo kala danbayn. MRC iyo 33 urur oo kale ayaa dalka Kenya laga mamnuucay bishii Oktoobar ee sanadkii tagay.